RADO watch အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Aommy Pu
RADO authenic and no error Original price - 1 သိန်းကျော်ပါတယ် သိမ်းထားတာပါ ပွဲတက်မှပတ်ဖစ်လို့ အပွန်းရာတောင်မရှိပါဖူးရှင့်... အခုက ငွေလိုလိုရောင်းတာပါအရမ်းလျော့ပေးထားလို့ error လို့ထင်နေမာဆိုးလို့.. အိမ်လာကြည့်ပြီးကြိုက်မှယူလို့ရပါတယ်ရှင့်..စက်ကလဲလည်နေပါသေးတယ်. အရမ်းကိုပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ high brand ဆိုတာကြည့်ရုံနဲ့သိမှာပါရှင့်..ဝယ်ထားပြီး မပတ်ဖစ်လို့ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့သုံးချင်တဲ့အမတို့တွက် ဈေးလျော့ပေးထားပါတယ်နော်.Sanchaung ကပါရှင်.deli ရှိပါတယ်.
အ့တာကြောင့် လက်မှာတောင်သူမပတ်ကြည့်ပါဖူးငွေအိပ်မာဆိုးလို့ပြန်ရောင်းတာပါ brand ပါ သားရေစစ်နဲ့လုပ်ထားတာပါ Kohl's brand ပါရှင့် အ့နာရီလေးတွေ ကိုတော့ အသစ်နဲ့အစစ် ဆိုတာအာမခံပါတယ်ဘူးအကုန်အသစ်ပါ tag တောင်ပါပါတယ် each - 38000 ပါ လျော့ပေးထားတာပါ. စိတ်ဝင်စားရင် Cb လာပေးနော်.
အမည်: RADO watch